Echiche na iwu ụlọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe - Ikkaro
Anyị na-emeghe a ọhụrụ ngalaba, na-ekwu okwu banyere engines.
Anyị ga-achọ ma kọwaa otu ha si aru oru na otu igha esi agha igwe oku na igwe eletrik.
Site Na-akpali akpali engines nke m nwere mmasị nke ukwuu ruo mgbe mfe batrị kwadoro moto na ịghasa. Aro ka ịnabata.
na 775 moto bụ ugbu a Motors eji ọtụtụ oru na echere m na ndị mmadụ amachaghị nke ọma.
Mgbe anyị na-ekwu maka ụdị igwe ndị a, na 775 na-ezo aka moto size na bụ ọkọlọtọ. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịchọta 775 nke ụdị dị iche iche rụpụtara, nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche na ike dị iche iche, yana usoro 1 nke biarin ma ọ bụ jiri abụọ. Mana ihe onye ọ bụla na-asọpụrụ bụ nha njin ahụ.
N’oge na-adịghị anya, edere m obere mana ee Patelo weputara igwe ohuru, a ga-enyocha ya. Ahụrụ m akụkọ na Ire ọkụ Afọ 1 nke ọrụ, awa 2520 iji wuo ihe ịtụnanya a.
Maka ndị na-amaghị ya Patelo (José Manuel Hermo Barreriro) bụ Onye ọrụ ụgbọ mmiri dị afọ 75, lara ezumike nká, nke ghọrọ ihe ama maka injin ya.
Patelo W-32 Injin
The ikpeazụ 32 cylinders na W, ihe engine ga-enwe ike na-anapụta a otutu nke ike ma ọ bụrụ na ọ bụghị a miniature abịakọrọ ikuku. Ọ na-amasị m, na ị nwetara ụdị igwe zuru oke ma na ha enweghị ụda. Lee mkpụrụ ego ọ na-etinye na moto. Dị ka Patelo si kwuo, ogo nke ịma jijiji na-ekpebi ndụ igwe ahụ.
Olee otú ime ka arụrụ n'ụlọ electrostatic moto
Ọ bụrụ na i wuru gị Van der Graaff generator na ị maghị ihe na-eme na ya, i nwere ike iji static ọkụ eletrik na ị n'ịwa dị ka a ike isi iyi nke a electrostatic moto.
Ọ bụ eziokwu na ọ bụ karịa naanị ịmata ihe, ma ọ nwere ike ịbụ ezigbo ọrụ sayensị, jenerato + electrostatic motor. Ọbụna mee ka a Igwe onyonyo isonyere na mkpọ nke nnwale electrostatic :)
Igwe ọkụ eletrik na-emeziwanye njikwa na nchedo ha
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ gara aga, anyị debara aha na Scheneider Electric Digital Library. Na nke a, anyị itiba ka ị ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Otu esi eme igwe eletriki nke Curie
N'ihi ntinye si Tao nke physics, Ama m Manetic Curie Mmetụta moto.
The moto dabeere na a onwunwe nke ferromagnetic ihe chọpụtara site Pierre Curie, nke bụ na mgbe a ụfọdụ okpomọkụ na ihe ida ha magnetism na-agaghịzi enwe mmasị na ndọta.
Mendocino Igwe Igwe
El Injin Mendocino bụ a igwe eletrik na ndọta levitates na-eji anyanwụ ike. Mma nke engine na-ekiri ka ọ na-agba ọsọ mgbe ọ na-ese n'elu mmiri. Ọ dị ka anwansi.
Ejiri akụkụ abụọ dị iche iche mepụta, sistemu magnet na - eme ya levitate na akụkụ electromechanical nke moto na - eme ya ka ọ na - atụgharị. Ihe mgbochi rotor nwere okpukpu abụọ nke eriri na anyanwụ dị na akụkụ ọ bụla. Ogwe osisi ahụ kwụ ọtọ ma nwee magnet na nsọtụ nke ọ bụla.
Stepper edemede moto
Nke nta nke nta na isiokwu site na isiokwu anyị na-abawanye obere nkuku anyị banyere edemede igwe.
Oge a ka anyị chọtala ederede nwere nkọwa zuru ezu nke igwe Stirling LTD na makezine (njikọ ahụ agbajiri) nwere ihu ọma anyị na-ejikwa ọdịnaya ahụ. Nke a engine bụ LTD, nke pụtara na ọ bụ iji na-arụ ọrụ na obere okpomọkụ differentials.
Anyị nwere nduzi zuru oke na Stirling engines, ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye n'ụwa a na-akpali akpali ọ na-atọ ụtọ na ị mụtakwara ntakịrị banyere akụkọ ntolite ya, ihe kpatara ha ji arụ ọrụ, ihe usoro mgbatị ha bụ, ụdị ndị e nwere, wdg
Mwube nke igwe na-akpali akpali.
Ọ bụ igwe nke ị ga-eji nlezianya rụọ ọrụ ya. Ọ bụghị ihe siri ike ịmepụtagharị ya, mana ọ bụrụ na anyị akpachara anya, anyị ga-enweta ọrụ ọrụ mmiri karịa.
Dịka ị pụrụ ịhụ na onyonyo ahụ, ọ bụ igwe ụdị
Igwe Igwe Igwe Na-adịgide Adịgide
Ugbu a, ewetara m gị maapụ a m hụrụ na Ibe John Bedini. Nke a engine, dị ka ọ na-egosi na ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Bedini Energy jenerato
Ndị nnọchianya Bedini sochiri Jim Watson, onye ọkà mmụta sayensị nyocha bi na Colorado, Springs. Watson gosipụtara ngwaọrụ ọrụ abụọ yiri nke John Bedini. Obere ngwaọrụ Watson rụrụ ọrụ na ngosi ahụ ma ndị na-ege ntị nwere ike ịhụ na batrị na-agbanye mgbe niile. E gosipụtara ngwaọrụ kachasị, nke dị kilogram 800, naanị maka nkeji 10 n'ihi ezigbo ihe. N'oge a, e wepụrụ ibu 12kw na-adịgide adịgide na ngwaọrụ ahụ. Ejiri batrị ụgbọ ala abụọ 12v kwadoro ngwaọrụ ahụ.